Iwo akanakisa SEO maturusi eecommerce yako | ECommerce nhau
Zvakanakisa SEO zvishandiso zveEcommerce yako
Kana iwe uri chikamu cha Chikwata cheSEO kana iwe wakangosarudza zano rekumira Pauri wega, pane akawanda eSEO maturusi eEcommerce yako ayo anozokubatsira kukwidzirisa chinzvimbo cheyako eCommerce saiti. Pano tinogovana zvimwe zveakanakisisa mune izvi.
1 SEOMoz Keyword Turu
3 Kurira Frog
SEOMoz Keyword Turu
Ndicho kuongorora chishandiso chemazwi akakosha uye SERP, izvo zvinokubatsira kushandisa zvirinani zviwanikwa zvako, gadzira zvinyorwa zvine zano reanokwikwidza mazwi akakosha, kuwana analytics metrics uye uwane izvo zvaunoda kuve pamusoro pevanokwikwidza.
Mune ino kesi, chishandiso chakagadzirirwa kutsvaga backlinks iyo inokutendera iwe kuti ugadzire yekubatanidza mikana yekugadzira, pamwe nekutsvaga zvinogona kukuvadza zvinongedzo zveEcommerce yako. Iwe unongofanirwa kupinda iyo URL yaunoda kuongorora wobva wadzvanya pane bhatani re "Tsvaga".
Iri rine simba SEO software iyo inobvumidza iwe kuti utore nekukurumidza uye uongorore mhedzisiro munguva chaiyo. Nekushandisa iyi Ecommerce SEO chishandiso unogona kuwana zvakaputsika zvinongedzo, ongorora mazita emapeji, tsvaga zvakapetwa zvemukati, gadzira XML sitemaps, inogona kutosanganisirwa neGoogle Analytics.
Ichi chishandiso che kugadzirwa kwemitsva yekutsvaga pawebhu kana kuwedzerwa kwezviripo. Iwe unogona kutsvaga mazwi akakosha uye mapoka ekushambadzira, tora nhoroondo dzezvakaitika, pamwe nekuona mashandisiro emazwi ako. Izvo zvinogona zvakare kukubatsira iwe kusarudza kuti ndeapi makwikwi makotesheni uye zvinopa zvekushandisa mumushandirapamwe wako weAdWords.
Neichi chishandiso unogona kugadzira Kuongorora SEO muEcommerce yako nenzira chaiyo uye yakavimbika. Iyo inokutendera iwe kuteedzera yako yemuno chinzvimbo, pamwe nekutarisa yako chinzvimbo zuva nezuva kuti iwe ugone kupindura kune shanduko mune yekutsvaga mhedzisiro. Iwe unogona zvakare kuwedzera maseru kana mapeji ekutevera mune chero nyika kana mutauro unopihwa neGoogle, Yahoo kana Bing.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Zvakanakisa SEO zvishandiso zveEcommerce yako
Mahara maturu ekutanga uye kuvaka yako StartUp
3 nzira dzekuwana mhando dzemhando yepamusoro dzeEcommerce yako